Ukuvavanya i-Aigo MP5, eziliqela kwi-One-Geofumed
NgoJulayi, 2009 ezintsha
I-Aigo ligama eliqulunqwe yiTshayina ukuzama ukukhuphisana negama le-Ipod, nangona lingazange lithinteke kakhulu, kule nkampani ziye zavela ezinjengezinto ezinjengejaja ye-solar ephathekayo kunye ne-microscope yedijithali. I-MP5-MP5901 yenye yezo, ngaphandle kwemidiya yokudlala imemediya inokusebenza njengememori ye-USB, umsakazo we-FM, i-e-book reader, phakathi kwabanye.
I-4GB ngokukhawuleza iyanelungelo lokudluliselwa kwedatha, ngaphandle kokuba isekela ikhadi le-MicroSD yokwandisa ukuya kwi-8GB, yeefowuni. Isisombululo esihle kakhulu sokujonga okanye ukukhuphela idatha kwikhamera yedijithali okanye kwifowuni xa uhamba.
Umdlali wemidiya kunye nokunye
Isekela inani elihle lefomathi zomsindo (MP3, WMA, APE, FLAC), ividiyo (RMVB, RM, AVI, MPEG, MPG, DAT, FLV, WMV) kunye neefoto. Ngaphandle koko, unesandi somsindo (ifomathi ye-WAV), ezayo okanye kamva xa kuyimfuneko xa uhlala kwiinkomfa apho ulindeleke ukuba uthathe amanqaku, akukho xesha elaneleyo kwaye kufuneka ucele uncedo lwememori kamva.
Xa iifowuni zixhunyiwe, ziba yi-antenna yokwamkela i-modulated (FM). Kwakhona kunokwenzeka ukurekhoda ngqo kwirediyo kwifom yeWave
Izisa umfundi kwiincwadi ze-e-books .txt formats, nangona andinomdla kuba injongo ukuguqula iincwadi SodelsCot ukusuka kwi-txt ukuya kwi-audio, kwaye usebenzise ithuba lokuhamba ngenxa yokuba ibhetri ehlawulwe nge-USB iyahamba ngaphezu kweeyure ze-8 kunye ne-3 kunye nevidiyo. Inketho efanelekileyo yokufunda (ukuva) ezininzi iincwadi eziya kwi-intanethi kwifomati yedijithali.
Okumangalisayo, ngokulula. Unayo iqhosha elilodwa kuphela ukucima / ukuya. Ezinye zenziwa ngezipikili kuba inomxholo weskrini 640 × 480 LCD, imenyu ekhangayo kakhulu yezinto zokusebenza ezisisiseko. Unesetyenzi esaneleyo ukwenza ibhetri ibambe ixesha elide, njengokulawula ukukhanya kwesikrini okanye ixesha lokuvala xa lingasetyenziswa.
Ufuna umgodi wokubeka intambo, kunye nengcamango yokuqinisekisa ukuba abantwana abayekanga okanye xa uya kuqhuba. Kulo mzekelo ozayo kuya kuba kuhle ukufunda i-SD evamile.
Ixabiso alibi, ukuba sicinga ukuba lizalisekisa imisebenzi ye-ipod, umdlali wevidiyo, umsakazo we-FM, irekhodi, isitophuwashi, imemori ye-USB kunye nomfundi wencwadi. Mhlawumbi i-$ 59 ayiyi kuchitha inyaka yenkxalabo yehlabathi, kodwa ukwenza isipho ngokutshintshana kwamanqaku aqokelelwe kwikhadi lekhredithi akuyiyo inkunkuma ... kwaye kule mihla ukuba amandla kagesi ahambe kwaye ixesha lokufika bayitshintsha njengamabhulu; Akukubi.
Post edlulileyo«Edlulileyo MobileMapper 6, ukuqala kokuqala
Post Next Funda ikhulu leminyaka yokulondeka kwiiyure ze-12Okulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Ukuvavanya i-MP5 Aigo, ininzi kwenye"
nestor Gomez uthi:
Ndifuna ukwazi ikhamera yingaphi i-mega ibhulaphu